From The Ground: Nigeria - Amjambo Africa
From The Ground: Nigeria
Maalintii Sabtida bisha labaad taariikh lix iyo tobon labada kun iyo sagaal iyo tobon. Waxay eheed maalin doorasha ah waxaa tartamaayey 69 musharax. Musharax oo kursiga ku fadhiyey waa 77 jirka madaxweyne Buhari iyo atika abubakar oo ah73 jir bilioner ah. Madaxweyne Buhari waa musharaxa xisbiga (All Progress Congress) Ganeral hore oo howl gab ah kaasoo horey ooga guuleystey doorashada 2015. Hada waxa uu uordayaa in mar labaad ku guuleysto. Abubakar waxa uu ahaa musharax xisbiga (PDP). Waxa uu horey madax weyne kuxigeen u ahaa Olusengun Obasanjo laga bilaawo 1999 ilaa iyo 2007.
Dadka inoo warmey waxay muujiyeen cabsi ay ka qaabaan Musharaxa Atiku.markuu ahaa madaxweyne kuxigeen, waxaa lagu eedeeyey in uu lacag malaayiin dolar oo uu ugudbiyey xaaskiisa afaraad Jennifer Douglas, oo hada ah wadani Amerikan ah, waxay hada degantahay Amerika. Waxaa lasheegey in loo diidey in uu soo gala Wadanka Amerika sanadka 2005 ilaa iyo hada markii lagu sawirey asoo joogey hotelka trump international oo kuyaala Washington DC bishii koowaad 2017 asagoo rabey inuu lakulmo gudoomiyaha baarlamanka dhinaca arimaha dibada iyo Africa. Hadii uu ku guuleysto kursiga waxaa laga cabsi qabaa in uu soo celiyo mususqmaasuqii baahsanaa, kaasoo wadanka uu wax badaan ladagaalamaayey.
Sabtidii bisha labaad taariikh sagaal. Waxaa dab kakacey xafiiska Indepedant National Election Commission burburiyey sanaadiiq ay kujiraan warqadaha codeynta kuwaasoo looga tala galey in lagu fuliyo howlaha doorashada. Dad kor joota ah ayaa waxay kashakiyeen in dabkaas lakiciyey si wax logo dhimo doorashada. Hase yeeshee waxaa dadka loo sheegey in ay doorashada dhaceyso waqtigii looga tala galey warqadihii la burburiyey dib ayaa loo daabacayaa. Doorashadaan Naigeria waxaa sababtey rabshada sanada badan, sida laga xigtey hay’ada International Crises Group, 108 qof ayaa lagu diley doorashadii dhacdey 2015. Waxaa kaloo lagu diley 800 qof doorashadii dhacdey 2011. Nigeria waxay rajeynessaa doorasho iyo xil kala wareeg nabdoon.
War deg deg ah oo nasoo gaarey Qolooyinka qaabilsan doorashooyinka waxay dib udhigeen hal usbuuc xiligii ay dhici laheed doorashada.dad badaan Nigeriaan ah ayaa u safrey wadanka si ay ucodeeyaan. Qaarkood uma suura galeyso in ay kunoqtaan wadanka taasoo aan usuura galeynin. Dib udhigista waxaa loo nisbeeyey dhinaca logistiga, usbuucyadii lasoo dhaafey ayaa waxaa dhacey dhibaatooyiin iyo rabshada iyo gubis warqadaha cod bixin iyo hawada oo xumaatey. Madaxweynaha talada haaya ayaa kutilmaamey in wax lagu xumaado ay tahay. Atiku waa uu cambaareeyey dib udhigista labada musharax waxay ku baaqayaan in la is dejiyo. La soco Ajambo Africa barteeda facebuuga si aad uhesho war bixinta doorashada.
NextFire Safety in Our Homes